Puntland oo sheegtay in ay aad uga xun tahay arday ay ciidamada Somaliland ku dileen magaalada Laascaanood - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandPuntland oo sheegtay in ay aad uga xun tahay arday ay ciidamada Somaliland ku dileen magaalada Laascaanood
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa sheegtay in ay aad uga xun tahay arday ciidamada Somaliland ay ku dileen magaalada Laascaanood ee gobolka Sool Isniintii lasoo dhaafay.
“Dawladda Puntland waxay ka xun tahay Ardeydii 20-kii August ay ciidamo ka amar qaata maamulka Soomaliland ku xasuuqeen magaalada Laascaanood, waxaana isla goobtaas ku geeriyooday labbo ardey oo kala ah Alle ha-u-naxariistee Marxuum Shaafici Cabdi Goox iyoMarxuumad Barwaaqo Cabdirashiid Warsame, sidoo kale waxaa dhaawac halis ah soo gaaray ardey kale, iyadoo ay horey Isbitaalada u yaaleen shacab lagu soo wax-yeeleeyey Laascaanood oo ay ka mid tahay dhibane Sacdiyo Xirsi Maxamed iyo shacab kale oo badan.” Ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay madaxtooyada Puntland maanta oo Arbaco ah.
Puntland waxay ka digeysaa weerarada, dilalka iyo tacadiyada sida joogtada ah loogu hayo dadka rayidka ah ee ku nool bobolka Sool gaar ahaan Magaalada Laascaanood, ayaa lagu sii sheegay bayaanka.
“Dawladda Puntland waxay ka xun tahay sida Hay’addaha u xilsaaran illaalinta xuquuqda aadamaha ay uga aamusan yihiin tacadiyadaas joogtada ah ee lagu hayo shacabkaas aan waxba galabsan.”
Dhowr qof oo shacab ah ayaa ku geeriyooday banaanbaxyo ka dhan ah maamulka Somaliland oo ka dhacay magaalada Laascaanood bilihii dhawaa ee lasoo dhaafay.